Fikarohana momba ny firaisana Miaramilan'ny Japoney Mihaona indray amin'ny maha-Vehivavy azy ary lasa mpivady, mahatakatra ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy sy ny lahy sy ny vavy amin'ny alàlan'ny Reincarnation; Sasha Fleishman - Fikarohana Reincarnation
Nathul, Burma nandritra ny fanjahana japoney
Ny fametrahana ity raharaha ity dia any amin'ny tanànan'i Nathul, ao Madagascar. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny Ny tafika japoney dia nibodo an'i Nathul, manomboka amin'ny 1942.
Rehefa nisy toby teo amin'ny lalamby akaiky, ireo mpiady sy mpampamono baomba dia nanapoaka baomba ny faritra ary nampiasa basy milina hanamboarana ny tany mba hamonoana ireo miaramila japoney izay noroahina. Ny fanafihana matetika dia hitranga indroa isan'andro.
Araka ny Ny fiaramanidina iraisana nihazakazaka tamin'ny andro antoandro, ny mponina Birmana tao Nathul dia hiparitaka any ambanivohitra amin'ny maraina. Niverina nody tany an-tranony avy hatrany ireo olon-dratsy avy eo. Nitohy nandritra ny lohataonan'ny 1945 ny fanafihana Allied. (1)
Daw Aye Tin sy ny Tafika Japoney Cook
U Aye Maung sy ny vadiny, Daw Aye Tin, dia mpikambana ratsy ao amin'ny vondrom-piarahamonina. U Aye Maung dia niasa ho mpiandry lavitry ny gara. Nanan-janaka telo vavy izy ireo.
Nandritra ny fanjanahana dia nanjary nahafantatra tamin'ny mpahandro ny tafika japoney i Daw, izay lehilahy matanjaka na lehilahy matevina. Noho ny hafanana, ity mpahandro ity dia manao pataloha shorts tsy misy lobaka. I David sy ny miaramila japoney dia liana amin'ny fahandroana ary nizara ny fahalalany manokana momba ny fomba fahandroan'ny Burmese sy Japoney. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy, dia tsy nifandray tamin'ity miaramila ity i Daw. (2)
Reincarnation & Planning Lifetime: Daw dia manonofy manambara ny miaramila japoney ho fanahy
Nandalo ny fotoana ary bevohoka i Daw. Nandritra io fitondrana bevohoka io, i Daw dia nanonofy miverimberina izay "miaramila japoney marobe mitafy pataloha fohy ary tsy nisy lobaka no nanaraka azy ary nilaza fa ho avy hijanona eo aminy izy"… Nahafantatra azy ho mpahandro ny tafika japoney izy. “Tao anatin'ny nofy dia natahotra ilay miaramila i Daw Aye Tin ary nilaza taminy mba tsy hanaraka azy. Io nofy io dia niseho intelo tamin'ny elanelan'ny dimy ka hatramin'ny folo andro. ”(3)
Tantaran'ny teraka ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny Ma's Groin sy Phobia of Aircraft
Davida dia niteraka zazavavy iray hafa tamin'ny Desambra 26, 1953, izay nomena anarana hoe Ma Tin Aung Myo. Voalaza fa manana mari-pahaizana fitaterana marika izy, voalaza fa toy ny patch mainty ny halehiben'ny ankibiana, eo amin'ny tendany. Ny tsenam-panaterahana dia niseho tamin'ny gatotra, toa an'i Ma no hanoratany azy. (4)
Tamin'ny fahazazako dia naneho habibiana mafy fiaramanidina nanidina teny ambony i Ma. Fony vao 4 izy dia teo am-pandehanana niaraka tamin-drainy, dia nisy fiaramanidina nandositra ary nanomboka natahotra i Ma. Ny dadany nanontany izay tsy mety, fa i Ma irery ihany no hilaza hoe: "Te hody aho, te hody hody." (5)
Taorian'izay, isaky ny fiaramanidina no manidina eo ambonin'i Ma i mba hitomany. Ho valin'ny fanontanian'ny rainy momba ny tahotra azy dia nanazava i Ma fa matahotra izy fa hitifitra azy ireo ny fiaramanidina.
Nanazava tamin’i Ma ny dadany fa tamin’ny fiaramanidina taloha no nitifitra olona, ​​saingy izao tsy niseho intsony. Tadidio fa nifarana tamin'ny 1945 ny fanjanahan'ny Japoney momba an'i Burma, miaraka amin'ny hazakazaka milina fiaramanidina miaraka aminy. Teraka tao 1953 i Ma ary toa izao, tsy mbola nahita fiomanana mitifitra olona i Ma. Ny fikasan'ny rainy dia nanome toky azy fa tsy nahomby ary nanohy ny fiaramanidina mahery i Ma nandritra ny taona maro. (6)
Fahatsiarovana ny fiainan'ny ankizy taloha: nilaza i Ma fa malahelo an'i Japon sy ny fianakaviany izy
Ankoatry ny fananana ity phobia ity dia mazàna dia toa kivy i Ma ary hipetraka mitomany irery. Raha nanontaniana izy hoe inona no tsy mety dia hoy i Ma: "Mbola miandry an'i Japon aho." (7)
Avy eo izy dia nanomboka nilaza tamin'ny fianakaviany fa nahatadidy izy fa miaramila Japoney napetraka tao Nathul, izay voatifitra sy novonoin'afo tamin'ny basy milina izay avy amin'ny fiaramanidina iray.
Ny tsaroany tsikelikely no lasa tamin'ny antsipiriany kokoa. Nilaza izy fa miaramila japoney lahy izy izay avy any avaratr'i Japana, izay nanambady ary manan-janaka 5. Napetraka tao Nathul izy ho mpahandro. (8)
Fahatsiarovana lasa teo amin'ny fiainana taloha: Ny fahatsiarovana an'i Ma Shot dia novonoin'ny fiaramanidina tamin'ny androm-piainany lasa teo
Tsaroan'i Ma fa teo akaikin'ny anton-kitay iray izy ary saika hanomboka sakafo rehefa hanakaiky ny tabataban'ny fiaramanidina iray. Tsaroan'i Ma fa ny antontam-kitay dia eo akaikin'ny hazo akasia, izay mijanona eo amin'ny 75 metatra miala ny trano nipetrahan'ny fianakavian'i Ma.
Nilaza izy fa nandritra io tranga io dia nanao pataloha fohy sy fehikibo be ilay miaramila, fa izy kosa nanala ny lobaka. Nampatsiahy i Ma fa ilay mpanamory ilay fiaramanidina dia nahita ny nahandro Japoney ary nanao dingan-dàlana mba hamonoana azy. Ny miaramila japoney dia nihazakazaka manodidina ny antokon-kitay nirehitra saika handositra nefa nisy bala iray namely azy teo amin'ny tendany, ka niafara tamin'ny fahafatesany. (9)
Ao amin'ny Toeran'ny Bullet Wound Japoney momba ny valan-jaza i Ma's Reincarnation birthmark
Tadidio fa i Ma dia teraka tamin'ny alàlan'ny fahaterahana eo amin'ny faritra ny vavoniny. Ian Stevenson dia nahita fa tamin'ny tranga maro izay nahafatesan'ny olona iray naratra, toy ny bala na ny latroka, dia nisy tsipika fiterahana iray hita tao amin'ny toerana iray ihany ao amin'ny fidiran'ny olona manaraka. Raha atao teny hafa, ny ratra dia mety ho lasa fitaterana. (10)
Ny Ady Amerikana izay namonoana Ma nandritra ny androm-piainana teo aloha dia Jiro P-38
Tsaroako ihany koa i Ma fa ny fiaramanidina namono azy tamin'ny androm-piainany satria ny Japoney miaramila dia manana rambony roa. Ilay fiaramanidina izay noresahin'i Ma dia tsy maintsy Tselatra P-38 Fahazavana, izay mpiady amerikanina namboarina amerikanina izay tena nampiasain'ny Allies in the Pacific Theatre ary indrindra ny any Burma.
Ny fiainana taloha Phobia amin'ny fiaramanidina
Taorian'ny fizarana ireo fahatsiarovana ireo, raha nisy fiaramanidina iray izay nanelingelina an'i Ma ary dia nambaran'ny havany fa tsy azo antoka ny tahotra, hoy i Ma hamaly tamim-pahatezerana hoe: “Inona no fantatrao? Voatifitra aho ary novonoina. ”
Tao amin'ny 1963, tamin'izaho 9 dia 11 taona, helikoptera tonga tao amin'ny saha iray tao Nathul. Ny ankamaroan'ny mponina dia tsy mbola nahita helikoptera ary nitangorona mba hijery ity masinina tsy mahazatra ity. Ny mifanohitra amin'izany kosa dia nanomboka nitomany i Ma ary nitsoaka tamin'ny tahotra tao an-tranon'ilay fianakaviana. (11)
Fihetseham-po lasa teo amin'ny fiainana: Te hiverina any Japon i Ma
Nilaza tamin'ny fianakaviany i Ma fa maniry ny hiverina any Japon izy, satria nandiso ireo zanany tamin'ny fotoana niainany izy. Nilaza izy fa rehefa lehibe izy dia hifindra any Japon. Mila fehikibo lehibe izy, toy ny miaramila japoney dia miaro ny kibony amin'ny hatsiaka. Ny fampahafantarana azy amin'i Japon dia tsy dia fahita firy, satria ny Burmese dia tsy tia ny Japoney, noho ny fanjanahan'izy ireo an'i Burma sy ny habibiana ataon'ny mpiasan'ny Japoney. Ny fianakaviana dia naneho ny hatezerany tamin'ny niantsoany an'i Ma, "ilay Japoney." (12)
Raharaha mety ho Xenoglossy
Tsikaritry ny fianakaviany koa fa hiresaka amin'ny tenany sy ny ankizy hafa i Ma amin'ny fampiasana teny izay tsy azony. Na dia tsy fantatra ny fiteny izay niresahan'i Ma, dia azo inoana fa miteny japoney i Ma. (13) Raha toa izany dia maneho ny fahafaha miteny fiteny iray nianatra tamin'ny fiainany teo aloha, tranga iray fantatra amin'ny hoe: Xenoglossy
Reincarnation & Gender Change: Ma Akanjo toy ny Lehilahy ary tezitra izy tonga fotoana
Ma naneho toetra masculine azo antoka. Nisisika ny hanao akanjon'ny zazalahy izy ary tsy nety nanao ny akanjon'ny zazavavy. Rehefa nanandrana nampiakanjo azy zazavavy ny reniny dia nariany tany ivelany ilay akanjo. Rehefa nanontany azy momba ity olana ity i Ian Stevenson, dia nirehareha i Ma fa tsy tompony na dia lambam-behivavy iray aza. (14)
Nitafy fohy ny volony, toy ny an'ny lehilahy ary nanao lobaka lehilahy. Ny olana momba ny akanjo dia nanjary olana lehibe fony kilasy fahenina i Ma. Notakian'ny tompon'andraikitra tao an-tsekoly ny fitafiany toy ny zazavavy. Nandà i Ma ary tsy maintsy nilatsaka. (15)
Rehefa nanana fotoana nanaovany fadim-bolana izy, dia nankahala azy, ary nilaza fa “tsy mety amin'ny lehilahy izany.” (16)
Reincarnation & Fanovana ny lahy sy ny vavy: Manaiky i Maora fa vehivavy lesbiana izy
Tao amin'ny 1972, fony 19 i Ma dia nilaza tamin'i Ian Stevenson fa tsy manana firaisana amin'ny lehilahy izy ary mila vehivavy ho vadiny izy. Nilaza izy fa efa manana sipa matanjaka foana amin'io fotoana io. (17)
Tao 1981, tamin'izaho 28 taona dia Ma sipa efa niarahany nipetraka. Nilaza i Ma fa raha manambady dia hanambady vehivavy tokoa. Mbola miresaka momba ny fidiran'ny tafika i Ma, “hiara-hiaina sy hiady amin'ireo lehilahy ireo.” (18)
Ny fanovana ny tranga fanalefahana ny lahy sy ny vavy dia mety hanazava ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy
Ity tranga ity dia manaporofo fa ny tranga reincarnation izay misy ny fiovan'ny lahy sy ny vavy dia afaka manome fanazavana momba ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, ny lesbienisma, ny transsexualism ary ny olana momba ny lahy sy ny vavy. Ny fandinihana indray an'i Ian Stevenson, amin'ny fanombatombanana, dia mampiseho fa ny fanahy dia manova ny fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny 10 isan-jaton'ny tranga. Raha misy olona zatra miaina amin'ny lahy sy ny vavy iray ary misy fiainana mifanohitra amin'ny lahy sy ny vavy, izany olona izany dia mety mbola hamantatra amin'ny lahy sy ny vavy taloha. Mety hitarika ho amin'ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, transsexualism, pifidianana ary maha-lahy sy ny vavy aretina.
Sasha Fleischman: May ny zoton'ny zatovo mirehitra
Tamin'ny volana novambra 2013, Sasha Fleischman 18 taona dia nandray ny bisy nody avy tany amin'ny lisea tany Oakland, Kalifornia. Teraka lahy i Sasha, fa aleony manao zipo. Nandritra ny nitaingenany bus, natory i Sasha. Mpianatra iray tao amin'ny lisea 16 taona no nandoro ny sisin-damban'i Sasha. Narehitry ny diplaoma faharoa sy fahatelo i Sasha ary voatery naiditra hopitaly tao amin'ny St. Francis bothin Burn Center, any San Francisco.
Ny tatitra an-gazety voalohany dia nanondro ity tranga ity ho heloka bevava fankahalana, na dia nanambara aza ny mpisolovava fa tena nokasaina hanao vava tsy mampidi-doza izy io, izay tena diso tanteraka. Na eo aza izany, olona iharan'ny pelaka, lesbiana na transsexual no niharan'ny fanenjehana. Tadidio ny raharaha Matthew Shepard.
Mety hoe zatra ara-nofo ny fanahin'i Sasha satria vehivavy. Na dia lahy ao anatin'ny androm-piainany ankehitriny i Sasha dia toa manana fehezin'ny vehivavy, izay mety hampiavaka azy ny manao zipo.
Reincarnation, olana amin'ny fanovana ny miralenta sy ny maha-lahy na maha-vavy
Ireo tranga fanakorontanana hafa izay mampiseho ny olana momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy noho ny fiovan'ny firaisana dia misy:
Jaako Vuorenlehto dia teraka indray amin'ny maha zanakavavin'ny vadiny azy, Taru Jarvi: fikorontanana eo amin'ny lahy sy ny vavy mandritra ny androm-piainana roa
Poldi Holzmuller, Vehivavy, tsy manintona zazalahy, milaza fa ho tonga nofo indray izy amin'ny maha zazalahy ary hanao
Ny réincarnation dia afaka manampy antsika hahay handefitra kokoa amin'ny olona manana olana momba ny fitovian'ny lahy sy ny vavy amin'ny fanomezana fahalalàna fa ny olana toy izany dia mety hanelingelina ny fanovana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy avy amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa. Mandritra ny fivoarana ataontsika mandritra ny androm-piainana eto an-tany, misy amintsika mety hiaina fisafotofotoana momba ny lahy sy ny vavy rehefa miray amin'ny firaisana ara-nofo izay tsy zatra antsika. Mino aho fa manova ny fitovian'ny lahy sy ny vavy mandritra ny androm-piainantsika eto an-tany isika, satria ny fanahy dia mitady fahatakarana feno momba ny maha-olombelona, ​​amin'ny alalàn'ny lahy sy vavy.
Reincarnation & Change of Gender: Lehilahy miaramila ilay miaramila Japoney, saingy teraka indray ao amin'ny nofo Ma, vehivavy. Ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson taloha dia nanondro fa amin'ny 90 isan-jaton'ny tranga dia miverina amin'ny vatana hafa ny fanahy, mitovy amin'ny firaisana ara-nofo na firaisana ara-nofo. Amin'ity tranga ity dia notazonin'i Ma ny fitarihan'ny lehilahy ny miaramila japoney, ao anatin'izany ny fisarihana vehivavy, izay nanjary lesbiana i Ma. Toa io fanahy io no nahazatra ny tonga nofo tahaka ny lehilahy ary na dia vehivavy aza ny nofo Ma, dia nitana ny fisainan'ny lehilahy iray.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Naneho habibiana fiaramanidina mahery vaika i Ma, toa noho ny voatifitra sy novonoina tamin'ny fifaninanana natokana ho an'ny P-38 tamin'ny fotoam-piainany lasa miaramila japoney iray.
Mari-pahaizana momba ny fiterahana ao amin'ny toeram-pialan-tany iray: Ian Stevenson, MD, nahita fa rehefa nisy olona maty noho ny ratra nahazo azy, toy ireo nateraky ny basy na antsy, dia tsikombakomba amin'ny fahaterahana no ho hita ao amin'ny toerana iray ihany ao anatin'ny androm-piainany. Amin'ity tranga ity, manana marika eo am-bavony i Ma, izay eo amin'ilay toerana ihany no nahitana ny ratra nahazo azy izay nahafaty azy tamin'ny androm-piainan'ny nahandro Japoney, araka ny fitadidiana ny fiainany taloha.
Ny réinkarnation sy ny fanovana eto amin'ny firenena: Ny miaramila japoney dia namorona indray ho vehivavy Birmana. Ity tranga ity dia mampiseho ny maha-zava-poana ny ady, satria nifehy an'i Burma ny Japoney ary nanenjika ny olom-pireneny. Tamin'ity raharaha ity, dia niverina nenjehina indray ny mpanenjika.
Ny fanamboarana ny vatana vaovao sy ny planeta: Daw, renin'i Ma, nandritra ny fitondrana vohoka, dia nanonofy ilay miaramila Japoney izay nanambaran'ny miaramila fa handeha hijanona miaraka amin'izy ireo izy.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Araka ny voalaza tetsy ambony, avy amin'ny tontolon'ny fanahy dia nandefa nofy nanambara tamin'i Daw ny miaramila Japoney hanambara fa ho teraka aminy izy.
1. Stevenson, Ian: Kases amin'ny karazana Reincarnation, Boky Faha-4, Thailandy sy Burma, Gazetin'ny Oniversite any Virginia, Charlottesville, 1983, pejy 231
15. Ibid, pejy 236, 241